Shina: Voasakana Ireo Protocoles-n’ny PTP sy L2TP VPN · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Marsa 2011 15:52 GMT
Fanavaozana tamin'ny 22 Martsa: mpamaky iray no nilaza taminay tamin'ny alalan'ny mailaka fa fa ny sasantsasany amin'ireo protocoles PPTP sy L2TP ihany no voasakana sy tapaka any Shina ary tsy manana olona miditra amin'ny alalan'ny PPTP sy L2TP izy avy any Beijing. Ny mpampiasa sasany avy any Guangzhou dia manamarika fa ilay fisakanana / fanapahana dia mihatra indrindra indrindra amin'ny telefona finday fa tsy ny solosaina finday. Bestvpnservice.com koa dia manana fanavaozam-baovao iray (21 Martsa) mokasika ilay toe-draharaha .
Mba hialàna ny Great Fire Wall sy hitsidihana ireo vohikala voasakana tahaka ny Twitter sy Facebook, maro ireo Sinoa mpampiasa aterineto no miditra amin'ny tolotry ny VPN.
Na eo aza izany, voamarina fa ny telo amin'ireo mpamatsy malaza indrindra ny VPN any Shina: Witopia, 12VPN and StrongVPN no voasakana na niato nanomboka ny 16 Martsa 2011 vokatry ny fanakanana ny PPTP sy ireo protocoles L2TP VPN.
Lasa malaza dia malaza ireo tolotry ny VPN ho an'ny sokajy antonony sy ireo vahiny monina any Shina mba hahazoana fahafahana mitsidika ireo vohikala vahiny. Rodders Gillam avy ao amin'ny Street articles dia manazava ny tombony azo amin'ny fampiasana ny VPN any Shina:
Ny asan'ny vpn dia ny manao kaody, manisy fonony, sy mandefa ny “données” anao any amina toeran-kafa alohan'ny famahàna azy, ny famahàna ny kaody, sy ny famerenana izany aminao. Amin'izany fomba izany dia afaka mifanakalo “données” manokana lavitry ny fanapaingorana sy ny fitsikilovana azy ireo orinasa. Amin'izay fomba izay ihany koa, ireo olona miaina ao anatin'ny Great Firewall dia afaka manisy kaody, mamono, sy mandefa ireo “données” azy manokana ka tsy iantefan'ny fitsiritsirihan'ny Big Brother izay manontany ny zavatra ataony. Ny vpn iray any Shina dia manome ireo olon-tsotra ny tsiambaratelo ary tsy mila mieritreritra izany isanandro ireo mpampiasa aterineto malalaka any Andrefana. Any Sina, izay saika tsy azo atao mihitsy ny manamarika pejy iray (fomba Tandrefana), ny fankanesana ao amin'ny Facebook sy ny fanavaozana ny mombamomba ny tena dia zavatra tena lafovidy tokoa.
Araka ireo vaovaon'ny Bestvpnservice.com ny 16 Martsa 2011, vosakana ireo PPTP (Point-to-point Tunneling Protocol) sy ny L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) izay protocoles-n'ny VPN. Ireo protocoles roa ireo dia nampiasaina indrindra tamin'ireo fitaovana mandehandeha mba hidirana anatina tambajotra sosialy manokana. Ny fepetra vaovaon'ny fanivànana dia ny fanakànana ny fivezivezen'ireo tambajotra sosialy, tahaka ny antso tamin'ny Fanaovana ny Revolisiona Jasmine Sinoa tato ho ato, izay nokarakarain'ny Fikambanamben'ireo Sinoa any ivelany ary alefa any amin'ireo mpiray tanindrazana aminy any Shina amin'ny alalan'ireo vohikala voasakana tahaka ny Twitter sy Facebook.
Mbola misy foana ny fomba hahafahan'ireo mpampiasa aterineto mahazo vaovao avy amin'ireo VPN voasakana. Efa namaha izany olana izany ny StrongVPN ho an'ireo Sinoa mpanjifa an-dry zareo . Na eo aza izany, ny 12vpn dia mamporisika ireo Sinoa mpanjifany mba tsy hiresaka ireo vahaolana sy ireo safidy amin'ny toerana misokatra ho an'ny rehetra:
@12vpn: Iangaviana ianao mba hiresaka mikasika ireo vahaolana/safidy amina toerana manokana, fa tsy ao amin'ny Twitter na any anatin'ireo sehatra fiadian-kevitra hafa misokatra ho an'ny rehetra. *Mamaky ireny* ny GFW .
Ireo vohikala sasany, tahaka ny Bestvpnservice.com dia manoro hevitra ireo Sinoa mpampiasa ny VPN mba hifindra any amin'ny SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol)/SSL(Secure Sockets Layer) sy ny tolotra SSL/OpenVPN raha hiditra amin'ireo vohikala vahiny.